လက်ကားလေဆာ Tube ထုတ်လုပ်သူနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း | Yandoon
Laser Engraving နှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
KDK လက်စွဲ Sideshift မြက်ရိတ်စက်
ဟိုက်ဒရောလစ် KDK Sideshift မြက်ရိတ်စက်
KDK ဟိုက်ဒရောလစ် Sideshift Disc ရိတ်စက်
လေဆာပြွန်၊ နာမည်အပြည့်အစုံဖန်: အလုံပိတ် CO2 လေဆာ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုလေဆာပြွန်တည်ဆောက်ပုံဟုလူသိများသည်။
အလုပ်မူအရမြင့်မားသောဗို့အားထုတ်လွှတ်မှုသည်လှိုင်းအလျား ၁၀.၆um ရှိသောလေဆာကိုထုတ်ရန်အာရုံစူးစိုက်မှုမြင့် CO2 ဓာတ်ငွေ့ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေသည်။
၎င်းကိုအဓိကအားဖြင့် hard glass၊ resonant cavity နှင့် electrode တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
1. Hard glass အစိတ်အပိုင်း၊ ဤအပိုင်းကို discharge tube၊ ရေအေးဂျာကင်၊ air storage jacket နှင့် air return pipe တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ CO2 လေဆာကိုအလုံပိတ်အများအားဖြင့်သုံးလွှာအကာအကွယ်တည်ဆောက်ပုံရှိသည်။ အတွင်းဆုံးအလွှာသည်ထုတ်လွှင့်ပြွန်၊ အလယ်အလွှာသည်ရေသန့်စင်သောအစွပ်ဖြစ်သည်၊ အပြင်ဘက်ဆုံးအလွှာသည်ဓာတ်ငွေ့သိုလှောင်သောအစွပ်ဖြစ်ပြီးလေ ၀ င်လေထွက်ပိုက်ကိုဓာတ်ငွေ့ပြွန်နှင့်ဓာတ်ငွေ့သိုလှောင်ရာပိုက်သို့ဆက်သွယ်ရန်အသုံးပြုသည်။
2. Resonator part: ဒီအပိုင်းကို full mirror နဲ့ output mirror တို့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ resonator ၏စုစုပေါင်းမှန်ကိုယေဘူယျအားဖြင့် optical glass ပေါ်တွင်အခြေခံပြီးရွှေဖလင်ဖြင့်အုပ်ထားသည်။ 10.6um အနီးရှိရွှေရုပ်ရှင်မှန်၏ရောင်ပြန်ဟပ်မှုသည် ၉၈%ထက်ပိုသည်။ resonator ၏ output mirror ကိုယေဘူယျအားဖြင့် multilayer dielectric film ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသော ၁၀.၆um ရောင်ခြည်ကိုထုတ်လွှတ်နိုင်သောအနီအောက်ရောင်ခြည်သုံးပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
3. Electrode အစိတ်အပိုင်း: CO2 လေဆာသည်ယေဘူယျအားဖြင့် cylindrical ပုံသဏ္coldာန်ရှိသောအအေး cathode ကိုသုံးသည်။ cathode ပစ္စည်းရွေးချယ်ခြင်းသည်လေဆာ၏ ၀ န်ဆောင်မှုအပေါ်များစွာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ cathode ပစ္စည်းများအတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်များမှာ sputtering rate နည်းခြင်းနှင့်ဓာတ်ငွေ့စုပ်ယူမှုနည်းခြင်း၊
ဘုံမော်ဒယ်များ: 15W, 25W, 40W, 60W, 80W
ကွဲပြားခြားနားသောပါဝါနှင့်လေဆာပြွန်များအားအဓိကအားမတူညီသောအရှည်များဖြင့်ခွဲခြားထားသည်။ ဥပမာ၊ 60W လေဆာပြွန်၏အရှည်သည် ၁၂၀၀ မီလီမီတာသို့မဟုတ် ၁၂၅၀ မီလီမီတာနှင့် ၈၀W လေဆာပြွန်၏အရှည်သည်ယေဘူယျအားဖြင့် ၁၆၀၀ မီလီမီတာဖြစ်သည်။
လေဆာပြွန်များကိုအဓိကအားဖြင့် CO2 လေဆာပြုပြင်ခြင်းသုံးပစ္စည်းများအတွက်သုံးသည်။ ထိုကဲ့သို့သောလေဆာထွင်းစက်၊ လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်၊ လေဆာအမှတ်အသားစက်စသည်
၁။ ၀ န်ဆောင်မှုသက်တမ်း။ လေဆာပြွန်သည်လေဆာဖြင့်ရေးသောစက်၏စားသုံးနိုင်သောကြောင့် ၀ န်ဆောင်မှုသည်သုံးစွဲသူများအတွက်အရေးကြီးဆုံး ၀ ယ်ယူမှုအညွှန်းဖြစ်လာသည်။ ၀ န်ဆောင်မှုသက်တမ်းကွာခြားချက်သည်အဓိကအားဖြင့်ပြုပြင်ခြင်းနည်းပညာနှင့်ဒီဇိုင်းနည်းပညာကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်အိမ်တွင်းလေဆာပြွန်များ၏အလုပ်လုပ်ပုံသည်နာရီ ၁၅၀၀ ခန့် (ဥပမာအားဖြင့် ၆၀W) ဖြစ်သည်။
၂။ လေဆာစွမ်းအင် - လေဆာပြွန်များ၏အမြင့်ဆုံးအလင်းအားသည်ကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ဆောင်ချက်နှင့်ကွဲပြားသည်။
3. Spot quality: သဘောသဘာဝကိုလေဆာပြွန်ပုံစံဖြင့်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ အလင်းရောင်၏အရည်အသွေးကိုထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များစွာ၏ဆက်စပ်မှုများဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည်။ အလင်း၏အရည်အသွေးသည်သုံးစွဲသူများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိသည်။
၄ င်းတည်ငြိမ်မှု - စွမ်းဆောင်ရည်ညံ့ဖျင်းသောထုတ်ကုန်များသည်လေထုယိုစိမ့်မှု၊ ပြင်ပပေါက်ကွဲမှုမရှိခြင်းနှင့်တည်ငြိမ်မှုအတွက်အခြားပြသနာများကိုကျရောက်လွယ်သည်။
ရှန်ဟိုင်း Yandoon စက်မှု Co. , Ltd.